Ahoana ny fanatanterahana fametrahana madio ny macOS High Sierra 10.13 | Avy amin'ny mac aho
Jordi Gimenez | | High Sierra macOS, Tutorials
Te-hametraka macOS High Sierra ve ianao amin'ny voalohany? Miatrika ny rafitra fiasan'ny Apple vaovao ho an'ny Mac isika ary rehefa apetrakao amin'ny solosainay ity dia misy karazana fametrahana roa azo tanterahina: ilay antsointsika hoe Vaovao farany sy ilay antsointsika hoe madio na avy am-boalohany.
Amin'ireo tranga roa ireo dia misafidy ny safidy tsara indrindra ny mpampiasa ary mazava ho azy fa miankina amin'ny zavatra ataontsika isan'andro miaraka amin'ny ekipanay ny zava-drehetra, raha manangona rindranasa na antontan-taratasy maro hafa izahay. Iray amin'ireo angon-drakitra manan-danja amin'ny tranga roa, na manavao na mametraka avy hatrany am-boalohany isika, tsy maintsy manao kopia nomaniny ho solon'izay Mac ao amin'ny Time Machine na mitovy amin'izany, ka hialantsika amin'ny aretin'andoha raha misy tsy mety.
Ny marina dia ity karazana fanavaozana manan-danja ity dia soso-kevitra hanao azy ireo hatrany am-boalohany na dia tsy ilaina aza izany, izany hoe Raha tsy te-hametraka macOS Sierra eo am-boalohany ianao dia sintomy fotsiny avy amin'ny Mac App Store ary kitiho ny installer. Manoro hevitra anao izahay hametraka amin'ny rangotra hamongorana ireo rindranasa tsy voafafa, lesoka na zavatra hafa mety hanimba ny traikefa amin'ny fanovana vaovao an'ny rafitra, mandrosoa izay tsy voatery, afaka manavao sy mandeha isika.
1 Fametrahana avy am-boany
2 Fanavaozana ny fitaovana
Fametrahana avy am-boany
Amin'ity tranga ity, ny zavatra hataontsika amin'ity taona ity dia ny fanilihana fitaovana iray izay manampy antsika hamorona ny kapila boot avy amin'ny USB na kapila ivelany misy tahiry 8 GB farafahakeliny. avy any Terminal no hanaovantsika azy. Ny zavatra voalohany hataontsika dia misintona macOS High Sierra avy amin'ny App Store, Rehefa vita ny fisintomana dia tsy hametraka azy isika, hanidy ny installer amin'ny alàlan'ny fanindriana cmd + Q.
Raha vantany vao manomboka ny fisintomana dia afaka manohy ny fizotry ny fametrahana hatramin'ny voalohany isika ary tena tsotra izany. Mamolavola ary omeo anarana ny USB ho dia manokatra izahay Terminal ary adikao ilay kaody fa hiala eto ambany isika dia hangataka amintsika ny tenimiafintsika, miditra azy isika ary manohy.
Vonona, izao dia namorona ny installer isika fa tsy mila miandry ny macOS High Sierra vaovao vao adika amin'ny USB. Hatao ho azy ny fanovana ary tsy maintsy mamolavola ny kapila anatiny misy antsika izay misy ny rafitra fiasa taloha, izany hoe macOS Sierra. Avy eo tsotra miaraka amin'ny USB na kapila ivelany mifandray amin'ny Mac, ny tokony hataontsika dia kitiho amin'ny alàlan'ny fanindriana Alt ary apetaho ny rafitra macOS High Sierra vaovao.
Fanavaozana ny fitaovana
Raha maniry isika dia afaka mandingana ny fametrahana amin'ny voalohany, manavao ny Mac fotsiny avy amin'ny Mac App Store. Ny zavatra ataony dia ny fametrahana ny rafitra ambonin'izay ananantsika ary na dia marina aza fa tsy manakana antsika tsy hanao an'ity karazana fanavaozana ity i Apple, raha manana rakitra, rindranasa ary hafa maro ao amin'ny Mac isika, dia mety handeha ho azy izany rehefa mandeha ny fotoana. raha tsy miadana. Fantatsika ihany koa ireo olona mbola tsy nanao fametrahana madio na volo tamin'ny Macs ary tsy nanana olana.
Na ahoana na ahoana, ny fanavaozana ny Mac dia tsotra ary tsy maintsy manaraka fotsiny ny dingana nasehon'ny mpampiorina macOS High Sierra. Azontsika atao ny mahita fa tena tsotra izy ireo ary amin'ny ankapobeny dia ny manome: manaraka - manaraka - manaraka.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny famahanana amin'ireto tranga ireto dia manan-danja ihany koa, mety hiatrika fanapahana herinaratra tsy ampoizina na fihemorana hafa manimba ny tolakandro isika ary indrindra ireo antontan-taratasy ananantsika amin'ny solosaina, ka alohan'ny tsindrio ny bokotra fanavaozana Taorian'ny fisintomana, dia zava-dehibe atao a nomaniny ho solon'izay mampiasa Time Machine na izay fitaovana tadiavintsika. Raha manana fisalasalana ianao dia azonao atao ny mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra.
Farany, hazavao tsara fa ny fametrahana amin'ny rindrina dia mety ho sarotra kokoa ho an'ireo mpampiasa tsy mahalala ny Mac na vao nividy ny fitaovana, noho izany raha manana Mac ianao vao tsy ela dia tsy nanam-potoana "hamoahana azy" ka tsara indrindra raha manavao mivantana ianao ary tsy hanana olana amin'izany ary hiasa tsara ny fitaovanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fanatanterahana fametrahana macOS High Sierra 10.13 vaovao
Salama, manana Imac aho tamin'ny 2013 ary aorian'ny famolavolana ny solosaina ary manandrana mametaka ny OSx dia lazain'ny rafitra amiko fa tsy misy ao amin'ny App Store i Sierra ...
manana USB bootable napetraka ve ianao? manana wifi miasa ve ianao?
Na izany na tsy izany, raha manaraka ireo dingana ianao dia tokony hiasa ho anao izany raha tsy izany dia afaka mametaka foana avy eo amin'ny famandrihana Time Machine ianao.
Efa miteny aminay ianao
Salama, raha manana Wi-Fi mihetsika aho nefa tsy manana USB noforonina na kopia amin'ny Time Machine… ary efa voalahatra ny solosaina….
Jereo fa mampitandrina momba ny backup foana izahay huh!
Andramo vonoina ny Mac ary rehefa manomboka izy dia tsindrio Option-Command-R, avy eo manavao ny kinova farany macOS izay mifanaraka amin'ny solo-sainanao
hoy ianao aminay
Ny tena izy dia azoko antoka avokoa ireo rakitra manan-danja rehetra, saingy te-hametraka indray ny OS amin'ny volo aho ... Nanaraka ny dingana nanomboka tamin'ny Command + R aho fa rehefa nitady ny App Store dia tsy nisy intsony ny OS ... raha tonga aho ny fahafantarana fa tsy hisy izany dia tonga amiko ny manafatra ny marina….
Tsara fa nanana fanontaniana aho, manana macbook pro 2012 aho ary te-hametraka hatramin'ny voalohany, manana kapila mafy roa aho, izay misy ny rafitra sy ny rindranasa napetraka ary HDD iray hafa izay tiako ny sary, mozika sy ny hafa. , tanteraho ny fametrahana hatramin'ny voalohany, samy voadio daholo ve ireo kapila? Sa ny cd fotsiny no haingoina?
Ry malala, formato fotsiny ilay SSD fa tsy ilaina ilay iray hafa
Salama Borja, ny kapila izay anananao OS ihany no tokony apetrakao, ny iray hafa, aza mikasika azy.
Salama indray, manandrana manao usb amin'ny mac hafa miaraka amin'i Sierra aho ary rehefa apetako ao anaty terminal ilay tsipika dia milaza amiko izy….
Tsy maintsy mamaritra lalan-kaleha ianao.
Imbetsaka aho no nanandrana ...
Ity baiko ity dia natao hamoronana installer ho an'ny macOS High Sierra, fa tsy ho an'ny macOS Sierra
Diso tokoa ny baikonao, mangataha ny lalan'ny volavola
Ny marina dia
Toa glitch ao anaty script izany rehefa manoratra ny kaody amin'ny tanana tsy izany?
Ary ny baiko dia mitovy amin'ny tranga roa
Raha ny marina dia nopihako sy nopetahana ilay izy, ilay napetrako dia efa voahitsy, efa manana ny mpampiditra ahy b Tks!
Winston duran dia hoy izy:
Manana iMac Late 2009 aho, nametraka macOS Sierra ary rehefa manandrana manavao ny macOS High Sierra aho dia mahazo lesoka ¨ Nisy lesoka nanamarina ny firmware ¨
misy vahaolana ve amin'io olana io ???
Valiny tamin'i Winston Duran
manakarama dia hoy izy:
Winston hi, manaova fizahana fanampiana voalohany amin'ny OS X ary zahao ny fanavaozana sierra avo na avereno avereno. arahabaina
Valiny amin'ny sarany
Winston dia hoy izy:
Efa vitako io ary noraketiko mihitsy aza ny usb hametrahana azy amin'ny 0, fa ny fametrahana tsy mamarana ary mandefa ahy hiverina hamerina ilay rafitra.
Mety ho tsy mifanaraka ny SSD (SanDisk) ary izany no mahatonga azy hanome izany fahadisoana izany na tsy avelany hametraka aho?
Valiny tamin'i Winston
Diso ireo tarehin-tsoratra alohan'ny «volom-bava»; Toa ny tranonkala rehetra no naka tahaka azy tamin'ny loharano diso iray. Mba hanitsiana azy dia esory ny tsipika efa misy ao anaty lahatsoratra ary soloina roa vaovao. Azonao atao ny mampiasa izao manaraka izao:
sudo / Applications / Mametraka macOS High Sierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia –volume / Volana / Tsy misy lohateny –applicationpath / Applications / Mametraka macOS High Sierra.app
Valiny tamin'i Anas
Raha hamafana ny kapila lehibe (SSD) amin'ny Disk Utilities, tokony apetraka ve ny AFPS na macOS Plus (miaraka amin'ny fisoratana anarana)?
Raha SSD izany dia azonao atao ny mametraka ny AFPS na macOS Plus, amin'izay tianao
Ny fitantanana rakitra miaraka amin'ny SSD dia milaza fa Apple dia haingana kokoa ary tsara kokoa amin'ny AFPS
Manu rehefa avy namaky forum maro dia nanoro hevitra ny hametraka macOS Plus (miaraka amin'ny fisoratana anarana) raha vantany vao vita ny fametrahana raha mijery ny kapila mafy ianao dia miseho amin'ny AFPS
Francisco Valenzuela Rojas dia hoy izy:
Omaly alina aho dia namorona fiara USB tamin'ny alàlan'ny terminal, ny fandraisana anjara dia ankasitrahana. Na izany aza, mieritreritra aho fa hiandry andro vitsivitsy, satria misy programa tsy mandeha amin'ity fanavaozana vaovao ity.
Valiny tamin'i Francisco Valenzuela Rojas
Nahita aho fa misy mpampiasa sasany manana olana mitovy amin'izay arosoko izao, dia nanandrana nanavao aho, saingy manome ahy lesoka fanamarinana Firnware. Nanoratra USB aho hanao ilay fametrahana 0, saingy tsy nahavita nametraka izany velively ary nandefa ahy tany amin'ny efijery fanarenana.
JESOSY ALONSO dia hoy izy:
Ny zavatra mitovy amiko dia mitranga amiko ao amin'ny macpro taona 2013 miaraka amina 1tb owc ssd, nanandrana aho manavao ihany ary na avy eo am-boalohany tsy nahomby aho na tavela teo amin'ny écran misy folder ary fanontaniana iray manjelanjelatra ao anatiny.
Valio JESÚS ALONSO
Salama, ao amin'ny macbook pro nataoko tamin'ny 2012, nametraka sierra avo avy tany am-boalohany tamin'ny fizarazaranana iray, hita fa lakile maromaro no tsy mandeha, rehefa avy any sierra dia tsy misy olana amin'ny fitendry, misy hevitra Misaotra indrindra anao
gardel9 dia hoy izy:
Tsara. Te-hisintona ny High Sierra aho hampiasa ssd ivelany ho kapila lehibe an'ny iMac. Ny tena izy dia efa nametraka azy aho, ary tsy avelany halefako indray. Ahoana no fomba anaovako azy hanombohana ny fizotrany manontolo aorian'izany?
Valio i gardel9
Rehefa mametraka Mac OS avo Sierra aho dia hangataka kaonty iCloud amiko izy, satria tsy manana aho, heverina fa rehefa mametraka avy hatrany am-boalohany dia toy ny hoe nividy azy io ho vaovao.
Mamaly an'i gilberto
Salama Ahoana no nandefasako macbook Pro fa tamin'ny fotoana nametrahana ahy dia mijanona eo afovoany ny OS ary tsy mametraka azy intsony. Nandao azy io nandritra ny andro maro aho hahitako raha mandeha izany na tsia. Ovay ihany koa ny kapila mafy ho an'ny iray hafa ananako fa tsy mamela ahy hamolavola Mac OS (miaraka amin'ny fisoratana anarana).
Miala tsiny amin'ny korontana ... fantatrao ve raha misy ny olana apetraka amin'ny volo amin'ny partition efa APFS? Misaotra anao
amin'ny iMAC faramparan'ny 2013, mamorona ny USB sy ny zavatra rehetra aho ok. Manomboka amin'ny ALT aho, misafidy ny USB ... Ary afaka minitra vitsy dia mahazo efijery mainty izay mifandimby eo amin'ny totozy sy ny kitendry (ary tsy fantatro ny totozy)
Total, tsy afaka aho ... Avy eo averiko indray ny COmand + Option + R ... ary avy eo raha manomboka miasa. Manontany ahy ny zavatra tiako hatao izy, ary mamolavola ny SSD hapetraka avy hatrany. Ny olana dia ny SSD dia efa nanana azy ho toy ny APFS ... Ampidiro, fa mijery ny hazo aho ary misy lesoka betsaka, indrindra mifandraika amin'ny AFPS ... Total, afaka 15 minitra dia milaza fa misy lesoka, ary tsy mametraka na inona na inona.
Manao zavatra mitovy indray aho, ary ny valiny dia mitovy; ary tsy azoko atao ny manavao ny SSD amin'ny MacO miaraka amin'ny fisoratana anarana ... tsy hamela izany.
Tamin'ny farany dia tsy maintsy tafarina tamin'ny Internet aho, ary avy eo ny TimeMachine ... ary mazava ho azy, tsy misy na inona na inona apetrakao amin'ny rangotra
Salama Miguel; Ny zavatra voalohany manisa anao dia tonga amiko (faly aho fa tsy izaho irery) ary miaraka amin'ilay maodelin'ny iMac (faran'ny 2013) ary koa amin'ny kapila mangatsiaka SSD (raha izaho dia novako tamin'ny Apple io. SAT ary nomeny iray tsy ofisialy aho) (ilay zavatra momba ny tsy fanekena ny totozy aorian'ny fisafidianana ny fizarazaran'ireo fametrahana USB).
Nanokatra resaka tamin'ny Apple SAT aza aho ary niafara tamin'ny fandraisako azy tamin'ny SAT ara-batana (nanana telo andro sisa aho mandra-pahatapitry ny Apple Care); Tsy nisy tamin'ireto tranga roa ireto no namaha azy ireo na nahatsikaritra azy ireo ho hadisoana, noho izany dia ao an-trano aho, miasa tsara daholo ny zavatra rehetra afa-tsy io pitsopitsony kely io.
Rehefa mamolavola azy amin'ny Control-Alt-R dia tsy nanana olana intsony aho, soa ihany fa amin'ny endrika APFS hatrany.
Na izany aza, amin'ny macbook 2016-ko dia tsy misy toa izany ary mandeha ara-dalàna ny zava-drehetra; ny iMac koa dia nanao an'io tsy nisy olana alohan'ny fanavaozana ny High Sierra sy APFS.
Salama ny anarako dia Antonio. Azafady mba jereo raha afaka manampy ahy ianao, misaotra anao mialoha aho.
Manana mac mini Yosemite miaraka amin'ny rafitra fiasa Sierra aho, lasa manavao azy aho ary mahita fa naharitra ela ny famonoana azy, izao tsy manomboka.
Manana keyboard fa tsy ny paoma dia fitokisana mahazatra.
Manana backup aho amin'ny kapila mafy ivelany, saingy tsy afaka mandefa azy amin'ny disk aho.
M. José dia hoy izy:
Salama, M. José no anarako. Vao nividy MacBook Pro aho ary tsy haiko raha afaka mametraka programa efa niasa toy ny print artist sy corel (heveriko fa mampiasa rafitra fandidiana hafa). Raha azo atao dia tiako ny hitenenanao amiko ny fomba hanaovana azy.
Valiny tamin'i M. José
Ny fandoavana fitateram-bahoaka any Singapore miaraka amin'ny Apple Pay dia mety ho zava-misy amin'ny taona 2018